Filibiin: laga bilaabo Dhisidda Nabadda iyo Kahortagga Fayras iyo Badbaadinta - Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah
Markii aan sameysanay shabakado adag oo leh saxiixyadeena farriimaha farriinta kale ee loogu talagalay dhisidda nabadda ee dhammaan gobolka koonfurta Mindanao ee Filibiin, shaqaalaheena deegaanka ee EAI waxay isla markiiba arkeen faa'iidada isticmaalka shabakadahan si ay uga caawiyaan jawaabta COVID-19 ee qaran.
Waqti badan kuma lumin inay abuuraan "OURmindaNOW COVID19 Casriyeynta Platform" in la kobciyo wada xiriirka muhiimka ah iyo macluumaadka ku saabsan ka hortagga viruska iyo dabeecadaha amniga. Platformku wuxuu ku saleysan yahay qaabkeenna macluumaadka / isgaarsiinta ecotolojiyadda nidaamka kaas oo si firfircoon uga hawl gala wada-hawlgalayaasha si ay u abuuraan, ula falgalaan, oo ay si joogto ah ugu wargeliyaan dadweynaha waxyaabaha ay asal ahaan soo saareen.
Sidoo kale lagu heli karo bog ahaantiisa Facebook, Platformku wuxuu aruuriyaa oo faafiyaa waqti munaasib ah, oo la xaqiijiyay, iyo macluumaad sax ah oo ku saabsan gobolka, Mindanao-ballaaran, iyo heer qaran oo ku saabsan ka-hortagga iyo badbaadada fayraska. Marka sidaas la sameeyo, waxay yareysaa faafitaanka macluumaad aan la hubin iyo kala-goyn iyadoo la dhiirrigelinayo farriimaha togan.
Mid ka mid ah alaabada macluumaadkayaga ugu caansan waa Kaararka Bulshada ee aan soo saarnay. Sawiradan muuqaalka indhaha qaadaya waxay bixiyaan ogeysiisyo wax ku ool ah iyo sida la fahmi karo-sida loo helo macluumaad ku saabsan waxkasta oo ku saabsan sugnaanta cunnada, jahawareerka bulshada, sheekooyinka tabarucidda, daryeelka carruurta iyo dadka naafada ah, iyo inbadan.
Eeg dhammaan Kaararka Bulshada oo ay weheliso qoraallo la xiriira dhegeysiga iyo wadahadallada halkan.